Sidee dadka loogu martiqaadaa kooxaha Telegram ee leh QR code | Androidsis
Codsiga farriinta ee Telegram ayaa soo xoogeysanayay tan iyo bishii Janaayo, dhammaantood ka dib markii lagu dhawaaqay WhatsApp iyo siyaasaddiisa caanka ah ee asturnaanta ee dhaqan galaya bisha Maajo. Waxaas oo dhan qalabku wuxuu soo bandhigayaa sheeko-xireyaal badan oo ka dhigaya inay ka horreeyaan tartanka la tixgelinayo.
Mid ka mid ah waxyaabaha aadka loogu jecel yahay Telegram waa kooxo, oo ugu badnaan loo oggol yahay ilaa 200.000 oo qof, dhammaantoodna aan illoobin shaqada xiisaha leh ee hadalka. Kooxaha martiqaadka waxaa badanaa lagu sameeyaa iyadoo la adeegsanayo xiriiriye martiqaad, laakiin ma aha sida kaliya ee dadka loogu daro.
Telegram wuxuu kaloo siinayaa suurtagalnimada in dadka lagu casuumo kooxo wata lambar QR ah, tani waa ikhtiyaar deg deg ah maxaa yeelay waa inay kaliya akhriyaan nambarka si loo helo kooxdaas. Abuuritaanka lambarka QR waa mid aad u fudud, tan waxaad ku haysaa casharradan si aad u abuurto mid ka mid ah bog internet, kanaalada Telegram iyo waliba kooxo.
Sida loogu marti qaado dadka kooxaha Telegram leh QR code
Tan awgeed waxay lagama maarmaan noqon doontaa in lala wadaago nambarka QR ee koox, mid cusub oo la abuuray ama mid aad adigu maamule ka tahay si aad u hesho rukhsadaha lagama maarmaanka ah. Markaad gasho macluumaadka kooxdaas, waxaad awoodi doontaa inaad ogaato inaad ka mid tahay maamulayaasha, haddii aad tahay, waxaad yeelan doontaa cod iyo wixii ka sarreeya oo dhan markaad codaynaysid.
Si loogu casuumo dadka kooxaha Telegram leh QR code waxaad ku sameyn kartaa sida soo socota:
Guji magaca kooxda si aad xogteeda u geliso, xusuusnow inaad tahay maamule si aad u heli karto lambarka QR, guji qalinka kore
Markaad riixdo qalinka wuxuu ku tusi doonaa dhawr xulasho, guji "Martiqaad xiriiriyeyaasha"
Bogga "Xiriirinta Joogtada ah" guji saddexda qodob ee toosan, hadda waxay ku tusi doontaa daaqad cusub: "Hel QR code" iyo "Jooji xiriirka", dhagsii midka hore oo guji "Share QR code", hadda u dir aad rabto, ama WhatsApp, Telegram, Twitter, Bluetooth ama emayl ahaan
Isticmaaluhu waa inuu akhriyaa lambarka QR si uu u galo kooxda in aad casuuntay waqtigaas, waxaa habboon in laga fogaado inaad ku casuuntid xiriir caadi ah, waa mid ka mid ah astaamaha cusub ee Telegram ee lagu daro dadka kale ee laga heli karo Beta
Awoodda lagu martiqaado QR code ayaa hadda lagu heli karaa nooca Beta, midka xasilloon ayaa heli doona toddobaadyada soo socda. Tan waxaa lagu dari doonaa awooda is-baabiinta sheekooyinka khaaska ah asal ahaan, fariimaha waa laga tirtiri karaa 24 saac ilaa 7 maalmood (hal usbuuc).
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sida dadka loogu casuumo kooxaha Telegram-ka ee leh QR code